Aqalka Sare oo u yeeray Wasiiradii tagay Jowhar, Maxay la xiriirtaa u yeerista Wasiiradan,? – Hornafrik Media Network
Aqalka Sare oo u yeeray Wasiiradii tagay Jowhar, Maxay la xiriirtaa u yeerista Wasiiradan,?
By HornAfrik	 On Aug 19, 2017
Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ayaa soo fara gelinaya xiisada siyaasadeed ee ka taagan Maamulka Hirshabeelle, kaddib markii Xildhibaano ka tirsan Hirshabelle ay sheegteen inay xilka ka qaadeen Madaxwayne, Cali C/laahi Cosoble.
Kulanka oo ah mid albaabada u xiran yahay ayeey Hornafrik ogaatay in Wasiiradan wax laga waydiiyay inay jirto Faragalin ay Dawladda dhexe ku hayso Arrimaha Hirshabelle, iyo sababta ay Dawladdu u cadayn la dahay Mowqifkeeda ku aadan arrimahan, Waxayna Xubno ka tirsan Aqalka Sare ka sheegeen Kulanka inay Dowladda dhexe wax ka abaabushay Xiisadda Hirshabelle.
Wasiiradda tagay Jowhar ayaan illaa iyo hadda u sheegeen Warbaahinta waxay kala soo kulmeen Jowhar, Waxayse sheegeen inay u gudbiyeen Madaxda Dowladda Somalia oo war ka soo saari doona Xiisadda Hirshabelle.
Madaxwaynaha Hirshabelle, Cali C/laahi Cosoble ayaa ku eedeeyay xiisadda Maamulkiisa ka dhex jirta inuu ka dambeeyo Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Somalia, Xasan Cali Khayre, isagoona ku hanjabay inuu Khayre uga bixi doono Siyaasadda Somalia fudaydkii uu ku soo galay.
Xubno ka tirsan Aqalka Sare ee Somaila ayaa u ololaynaya in la soo afjaro Xiisadda Hirshabelle, isla markaana meesha laga saaro Sheegashadda Xildhibaanadda ku doodaya inay Xilka ka qaadeen Cali C/laahi Cosoble. Waxayna u yeerista Wasiiradda tagay Jowhar qayb ka tahay cadaadiska ay Dowladda ku saarayaan inay taageerto Cosoble.
Xog: Xeraale oo Madaafiic lagu garaacay, iyo Dagaal maantay qarxay, Maxaa Khasaare ah oo ka dhashay,?
Xog: Muxuu la xiriiraa Socdaalka uu Cali Cosoble ku yimid Muqdisho,?